မီးမြေခွေးကိုအမြန်ကိုက်စေမဲ့နည်းလမ်းတဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » မီးမြေခွေးကိုအမြန်ကိုက်စေမဲ့နည်းလမ်းတဲ့
Posted by ကြောင်လေး on Jul 11, 2012 in Computers & Technology, Copy/Paste, Facebook | 10 comments
ဒီပိုစ့်ကို network ဒီပလိုမာ တစ်ယောက်ရေးထာတာပါ နာမည်မေ့နေတယ် သိတာနဲတင်ပေး ပါမယ်
Facebook မှ ko Lin Thalarwadd ထံမှကူးယူဖော်ပြပါသည်။
အခုမှဖေ့ဘုတ်ကတွေ့လို့ ကူးတင်ပေးလိုက်တာပါ။ သိပြီးသားတင်ပြီးသားဆိုရင်တောင်းပန်ပါတယ်။ စမ်းကြည့်ပြီးသူများအကျိုးအကြောင်းလေးပြောပြပေးကြပါ။
မီးမြေခွေးကို အမြန်ကိုက်စေမဲ့နည်းလမ်းဆိုတော့ သဲထိပ်ရင်ဖိုတွေဖတ်ရတော့မယ်ထင်လို့ …
မထူးခြား… ဘယ်လိုမှ ….အိုဟိုးအိုးဟိုးးးးးးဟို
ထူးးးးးအူးးးးအူးးးအု … မခြားးးးဟားးးးနားးးးးး …
ညန်မာပီပီ အဲလို လုပ်ပါဟ ..
တော်ကြာတက်နေတဲ့ speed လေး ပြန်ပြုတ်ကျသွားရင်
ကိုကြောင်လေး ရဲ့ စေတနာ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျို့။ နောက်ထပ် အင်တာနက်မြန်နှုန်းမြင့်တဲ့နည်းလေးများရှိရင်လဲတင်ပေးပါဦး။
နည်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ ..
အဲဒီနည်းကို ကျနော် စမ်းခဲ့ဖူးပါတယ် ..
ထင်သလောက်တော့ မမြန်ပါဘူး ..
အင်တာနက် မြန်ဖို့တော့ မသိဘူးဗျာ ..
Browser မြန်ဖို့ဆိုရင်တော့ ..
သူ့ရဲ့ Version နဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ် ..
ဗားရှင်းက မြင့်ပြီး စက်က နိမ့်နေရင်လည်း မမြန်နိုင်ပါဘူး ..
ဒါကြောင့် ကိုယ်သုံးတဲ့ စက်နဲ့ Browser ဗားရှင်းနဲ့ ညှိပြီးသုံးနိုင်မှ မြန်နိုင်ပါ ဖြစ်ပါကြောင်း ..
ကိုယ်တွေ့အပေါ် အခြေခံ၍ ပြောလိုက်ရပါသည် ….
ကျေးဇူးပါ ကိုအိမ်မြှောင်ဘိုးအေရေ။ကျနော်လည်း ဖရဲသီးပြောသလိုမလုပ်ရဲလို့ သများတွေ ဘာပြောမလဲစောင့်နားထောင်နေတာ။(တဆာခံရှာတာ) ဘဲဥပြောတာနဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးအားချိ သွားတယ်…….
ကိုလေလွင့်တိမ် ရေ မမျှော်နဲ့တော့၊ကိုတောက်တဲ့ရှင်းပြတာလေးသာဖတ်ကြည့်။
ဝေါင်း ရေ အဲဒီပွစိပွစိလုပ်နေတဲ့နှုပ်ခမ်းရဲရဲကြီး ကြည့်ပြီး အသဲတွေ ယားလာတယ်…..ကျလိ…ကျလိ၊